Beautiful Horn of Africa: XAABADII INDHOOLAHA ARAGGA U FURTAY
Aabbe indhoole ayaa wiilashiisi mid ka mid ah faray in uu kaheeyo hal iyo rati oo hasha uu soo gado, ratigana badar lagu soo raro. Odeygii wuxuu la dardaarmay wiilkiisa in wax faataxa la socoto uu ku gado hasha.
Wiilkii hashii ayuu suuqa geeyey. Intaasi iga sii markii la dhahaba wuxuu sii raaciyaa,oraahda ah "maxaa la socdaa." Dadkii suuqa xoolaha joogay ayaa la yaabay, weyna ka kala dhaqaaqeen.
Markuu hashii iib ku waayey, ayuu soo carraabiyey. Intuu dhexda soo socdey ayuu la kulmay habar xaabo dhabarka ku sidato. Wey wareysatay wuxuuna u sheegay in hasha oo uu iib la rabay laga gadan waayey.
Habartii ayaa ka codsatay wiilkii in ayada uu ka gado hasha. Wuxuu weydiiyey qiimaha ay ka siineyso waxayna ugu jawaabtay in xaabada ay dhabarka ku sidatay kaga iibsaneyso. Su'aal ayuu daba dhigay oo wuxuu weydiiyey, "maxaa la socdaa"? Waxay ugu jawaabtay, "waxaa la socdaa afar faataxa oo min iyo moora gasho."
Xaabadii ayuu ka guddoomay wuxuuna ku wareejiyey hashii, halkii laga sugaayey badar. Markuu degmadiisi tegey ayaa lagu soo xoomay oo lagu buuqay. Odeygii wiilka dhalay ee indhoolaha ahaa ayaa dadkii ka codsaday in wiilkiisa ay ka joojiyaan buuqa iyo sawaxanka. .
Odeygii wuxuu su'aalay wiilkii oo wuxuu weydiiyey halkii ay ku dambeysay hashii uu faray in uu soo gado wuxuuna ugu jawaabay in dardaarankiisi uu ahaa in uusan gadin hasha haddii aysan faataxa la socon waxa looga iibinayo.
Markuu iib lacageed ku waayey ayuu xaabo faataxa la socoto ku doorsaday. Odeygii xaabadii ayuu shiday, iskuna qiiqiyey kadibna indhihii ayaa ufurmay. Xaabadii 10,000 oo indhoole ahaa ayaa lagu daweeyey mid walibana wuxuu ka qaatay labo qaalmood oo geel ah. Sow la yaab ma aha?
Posted by Adan Makina at 6:29 PM